रियल मड्रिडसँगको खेलमा गम्भीर गल्ती गरेका लिभरपुलका गोलकिपरलाई धम्की | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > खेलकुद > रियल मड्रिडसँगको खेलमा गम्भीर गल्ती गरेका लिभरपुलका गोलकिपरलाई धम्की
रियल मड्रिडसँगको खेलमा गम्भीर गल्ती गरेका लिभरपुलका गोलकिपरलाई धम्की
जेठ,१४/ लिभरपुलका गोलकिपर लोरिस कारियसका लागि युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल म्याच आफ्नो करिअरकै सबैभन्दा खराब बन्न पुग्यो । गत शुक्रबार राति रियल मड्रिडविरुद्धको उक्त म्याचमा उनको गम्भीर दुई त्रुटीका कारण लिभरपुल पराजित हुन पुग्यो । सोही खेलमा उनको खराब प्रदर्शनका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्को टिप्पणी भइरहेको छ । फेसबुक, ट्वीटरमा उनलाई धम्कीसहितका टिप्पणी आउन थालेका छन् । कयौंले त उनलाई ‘बाँच्नु नै बेकार’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले आक्रमणको धम्की दिएको बताइन्छ ।
मर्सिसाइड प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा गोलकिपर कारियसलाई दिइएको धम्कीकाबारे आफूहरु जानकार रहेको भन्दै आवश्यक छानविन सुरु गरिएको जनाएको छ । कारियस स्वयंले पनि रियल मड्रिडविरुद्धको खेलमा आफूले गम्भीर त्रुटी गरेको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका छन् । मध्यान्तर अघि गोलरहित बराबरीमा रहँदा मध्यान्तरपछि उनको गल्तीका कारण रियल मड्रिडले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
दोस्रो हाफमा कारियसले हातले बल पास दिने क्रममा रियल मड्रिडको करिम बेन्जेमाको खुट्टामा बल ठोक्काउन पुगेका थिए । जबकी करिम उनकै सामुन्ने थिए । करिबको खुट्टामा लागेर फर्किएको बल गोलमा परिणत भएको थियो । बेलले प्रहार गरेको लामो सटलाई कारियसले पञ्च गर्न खोजे पनि उनको हातमा लागेरै बल गोलपोस्टको जाली चुम्न पुगेको थियो ।
कहाँ छन् कपिल शर्मा ? अब मिडियामा फर्केलान् त ?
एक हप्ता भित्र नै ओली सरकारमा उपेन्द्र यादव आउने !कुन मन्त्रालय दिदै छन ओलीले ?पढ्नुहोस
छोरिको मृत्यु भएकै दोश्रो दिन पिडा लुकाएर मैदानमा
नेपाललाई लगातार सफलता, करणले लिए तेस्रो विकेट
लिग कपको फाइनलमा आर्सनल र म्यानचेस्टर सिटि